ငယ်စဉ်က ခြေဗလာနဲ့ဘောလုံးကစားခဲ့ပြီး ကြိုးကြာနီတပ်ဖွဲ့ဝင်သစ်ဖြစ်လာသူ Keita
17 Jul 2018 . 6:49 PM
အောင်မြင်မှုအသီးအပွင့်ဆိုတာက နှစ်ပေါင်းများစွာ မဆုတ်မနစ်တဲ့ဇွဲ၊ ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်၊ လုံလတွေ ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှ ဆွတ်ခူးရရှိမယ့်အရာတစ်ခုပါ။ ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့သူတွေရဲ့ Biography ကို ပြန်ကြည့်ရင် အခက်အခဲတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီးမှ ထိပ်ဆုံးနေရာတွေကို ရောက်ရှိလာသူတွေချည်းပါပဲ။ ကြိုးကြာနီတို့ရဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်သစ် နာဘီကီတီ Naby Keita လျှောက်လှမ်းခဲ့ရတဲ့ ခရီးကလည်း ကြမ်းတမ်းလွန်းခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲ့ဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာ အပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ ဂီနီနိုင်ငံက လုံခြုံစိတ်ချရမှုလည်းမရှိ၊ ဆင်းရဲသားအများစုနေထိုင်တဲ့ Conakry ဒေသမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရသူ၊ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဘောလုံး Crazy ဖြစ်ခဲ့သူ။
ငယ်စဉ်ဘ၀မှာ ကီတာဟာ လူရှုပ်ထွေးနေတဲ့ လမ်းမပေါ်မှာ ခြေဗလာနဲ့ ဘောလုံးကစားခဲ့ရပြီး ဥဒဟို သွားနေတဲ့ ကားတွေကို ရှောင်တိမ်းရင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူ ဘောလုံးကစားခဲ့ရတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကားနဲ့ဝင်တိုက်မိတာတောင်ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအရာတွေက ကီတာရဲ့ နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ကို မတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘူး။ သူဟာ အောင်မြင်မှုခရီးလမ်းမှာ ဘယ်လိုအတားအဆီးတွေပဲရှိနေပါစေ မရောက်ရောက်အောင် သွားဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြနေတဲ့သူပါပဲ။
ကီတာက “ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဘောလုံးကစားဖို့ဆိုရင် ဘာနဲ့ပဲကစားရပါစေ ဆော့ကြတာပါပဲ။ ကျွန်တော်လည်း ခြေဗလာနဲ့ ကစားခဲ့ရပြီး တစ်ခါတစ်လေတော့ ဟောင်းနွမ်းစုတ်ပြတ်နေတဲ့ ဖိနပ်တွေ ၀င်ဆင်ကစားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ဘောကန်ဖိနပ်မရှိဘူး။ လက်ဆောင်ရတဲ့ ဘောလုံးအင်္ကျီတွေဆို အရမ်းတန်ဖိုးထားတယ်။ အဲဒီအရာတွေက လက်ရှိအချိန်မှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ ကျွန်တော့်ကို တွန်းအားပေးခဲ့တဲ့အရာတွေပါပဲ။ ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင် ကျွန်တော်က လူကောင်သေးတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားတဲ့ပွဲတွေမှာ ၀င်ကစားခွင့်ရဖို့ အသည်းအသန်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ ပွဲကစားခွင့်ရဖို့၊ ဘောလုံးရဖို့၊ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ လေးစားမှုရဖို့အတွက်ပေ့ါ။ အဲဒီအတွက် လမ်းပေါ်မှာ သွားနေတဲ့ ကားတွေကိုတောင် ကျွန်တော် ဂရုမစိုက်တော့ဘူး”လို့ ငယ်ဘ၀ကို ပြန်ပြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်။ ကီတာဟာ ဘယ်လောက်တောင် ဘောလုံးကန်ရတာ ၀ါသနာပါလဲဆိုရင် သူ့ရှေ့မှာ ကန်လို့ရတဲ့အရာတွေမှန်သမျှ လျှောက်ကန်နေပြီး သူ့မိဘတွေက တစ်ချိန်ချိန်ကျရင် ကီတာဟာ ပရိုဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်လာမယ်လို့ အခိုင်အမာယုံကြည်ခဲ့တယ်။
အသက်(၉)နှစ်အရွယ်မှာ ဒေသတွင်းကလပ်ဖြစ်တဲ့ Horoya AC အသင်းဆီ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး Conakry ဒေသမှာတော့ ကီတာက အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အသက်(၁၂)နှစ်အရွယ်လောက်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲတွေကို TV ကနေ တစ်ဆင့်ကြည့်ရှုခွင့်ရခဲ့ပြီး တစ်ချိန်ချိန်ကျရင် ထိပ်တန်းလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ကစားခွင့်ရဖို့ အိပ်မက်က ပိုပြင်းထန်လာခဲ့တယ်။ “ကျွန်တော် ဘောလုံးသမားဖြစ်ချင်တာက ဘောလုံးပွဲတွေကို ချစ်မြတ်နိုးရုံတင်မဟုတ်ဘဲ မိသားစုကို ထောက်ပံ့ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်လည်းပါပါတယ်”။ ကီတာဟာ ဂီနီစစ်တပ်ရဲ့ကလေးစစ်သားစုဆောင်းရေးမှာ အဆွဲခံရဖို့ နီးစပ်ခဲ့ပေမယ့် ကံကောင်းထောက်မလို့ လွတ်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မဟုတ်ရင် ဘောလုံးသမားမဖြစ်ဘဲ စစ်သားဘ၀နဲ့ အဆုံးသတ်ရမယ့်ကိန်ပါပဲ။
ကီတာရဲ့ဖခင်က လီဗာပူးလ် Crazy Fan တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့အဖေရဲ့ အားပေးမှုကြောင့် ကီတာလည်း လီဗာပူးလ်ပရိသတ်တစ်ဦး ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ တစ်ဆက်တည်း သူ့သူငယ်ချင်းတွေပါ လီဗာပူးလ်ပရိသတ်တွေဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။ ထိပ်သီးဘောလုံးသမားဖြစ်ချင်ရင် ပြည်ပကို ထွက်ကစားမှဖြစ်တာကြောင့် အသက်(၁၆)နှစ်အရွယ်မှာ ကီတာ ပြင်သစ်မြေကို စတင်ခြေချခဲ့ပါတော့တယ်။ ကိုယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့နယ်မြေ၊ မတူညီတဲ့ဘာသာစကား စတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့အတူ ကီတာအတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေက စတင်တော့တာပါပဲ။ လော်ရီယန့်အပါအ၀င် ပြင်သစ်ကလပ်တော်တော်များများမှာ အစမ်းလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမယ့် ငြင်းဆန်ခံခဲ့ရတယ်။ ကီတာကို လီမန့်စ်အသင်းက ခေါ်ယူလိုပေမယ့်လည်း သူတို့အသင်းရဲ့ ဘတ်ဂျက်အခြေအနေအရ လက်လွှတ်ခဲ့ရပြီး ကီတာအတွက် ကံကောင်းမှုတစ်ခုလို့ပဲဆိုရမလား၊ ကစားသမားကောင်းတစ်ဦးကို လက်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက် လီမန့်စ်အသင်း ကံဆိုးမှုပဲ ဆိုရမလား။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ပြင်သစ်ကလပ် FC Istres အသင်းက ကီတာကို ခေါ်ယူခဲ့ပြီး တစ်ရာသီအကြာမှာပဲ သြစတြီးယားကလပ် ဆာလ်ဘာ့ဂ်အသင်းဆီ ရောက်ရှိခဲ့တယ်။ ဆာလ်ဘာ့ဂ်အသင်းမှာ သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းက အခု လီဗာပူးလ်အသင်းဖော် မာနေး Mane ပါ။ “မာနေးဟာ ကျွန်တော့်ကို အစစအရာရာ ကူညီခဲ့တယ်။ ဘာသာစကား၊ မိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့၊ အသင်းနဲ့ဒီမြို့အကြောင်းကို နားလည်ဖို့ အားလုံးပေါ့။ မာနေးဟာ အရင်တုန်းကရော အခုအထိ ကျွန်တော့်ဘ၀အတွက်အရေးပါတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ သူဟာ အကိုကြီးတစ်ယောက်လိုပါပဲ”။၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ဂျာမန်ကလပ် လိုက်ပ်ဇစ်အသင်းဆီရောက်ရှိခဲ့ချိန်မှာ ကီတာရဲ့ကစားသမားဘ၀ အောင်မြင်မှုခရီးလမ်း စတင်ချိန်လို့ဆိုရမယ်။ လိုက်ပ်ဇစ်အသင်းနဲ့အတူ တောက်ပလာတဲ့ ကီတာကို ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာပဲ လီဗာပူးလ်အသင်းက ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်။
အခုဆိုရင် ကီတာဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက အားပေးခဲ့ရတဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းမှာ ကစားခွင့်ရပြီ၊ သူကစားချင်တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်လို ထိပ်သီးပြိုင်ပွဲမှာလည်း ကစားခွင့်ရပြီ။ လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ဂန္ထ၀င်ကစားသမား ဂျရတ် Gerrard ၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ကျောနံပါတ်(၈)ကိုလည်း ၀တ်ဆင်ခွင့်ရခဲ့ပြီ နောက်ထပ်အိပ်မက်ဖြစ်တဲ့ နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားဖြစ်ဖို့ အိပ်မက်ကလည်း ဖြစ်ခွင့်ရမလားဆိုတာတော့ . . .
ငယျစဉျက ခွဗေလာနဲ့ဘောလုံးကစားခဲ့ပွီး ကွိုးကွာနီတပျဖှဲ့ဝငျသဈဖွဈလာသူ Keita
အောငျမွငျမှုအသီးအပှငျ့ဆိုတာက နှဈပေါငျးမြားစှာ မဆုတျမနဈတဲ့ဇှဲ၊ ခိုငျမာတဲ့ယုံကွညျခကျြ၊ လုံလတှေ ပေါငျးစပျပွီးတော့မှ ဆှတျခူးရရှိမယျ့အရာတဈခုပါ။ ကဏ်ဍအသီးသီးမှာ အောငျမွငျကြျောကွားတဲ့သူတှရေဲ့ Biography ကို ပွနျကွညျ့ရငျ အခကျအခဲတှေ၊ စိနျချေါမှုတှကေို ကြျောဖွတျပွီးမှ ထိပျဆုံးနရောတှကေို ရောကျရှိလာသူတှခေညျြးပါပဲ။ ကွိုးကွာနီတို့ရဲ့ တပျဖှဲ့ဝငျသဈ နာဘီကီတီ Naby Keita လြှောကျလှမျးခဲ့ရတဲ့ ခရီးကလညျး ကွမျးတမျးလှနျးခဲ့တယျ။ ကမ်ဘာ့အဆငျးရဲ့ဆုံးနိုငျငံတှထေဲမှာ အပါအဝငျဖွဈတဲ့ ဂီနီနိုငျငံက လုံခွုံစိတျခရြမှုလညျးမရှိ၊ ဆငျးရဲသားအမြားစုနထေိုငျတဲ့ Conakry ဒသေမှာ ကွီးပွငျးခဲ့ရသူ၊ ငယျစဉျကတညျးက ဘောလုံး Crazy ဖွဈခဲ့သူ။
ငယျစဉျဘဝမှာ ကီတာဟာ လူရှုပျထှေးနတေဲ့ လမျးမပျေါမှာ ခွဗေလာနဲ့ ဘောလုံးကစားခဲ့ရပွီး ဥဒဟို သှားနတေဲ့ ကားတှကေို ရှောငျတိမျးရငျး သူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူတူ ဘောလုံးကစားခဲ့ရတယျ။ တဈခါတဈလေ ကားနဲ့ဝငျတိုကျမိတာတောငျရှိခဲ့ဖူးတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီအရာတှကေ ကီတာရဲ့ နာမညျကြျောဘောလုံးသမားဖွဈခငျြတဲ့ စိတျကို မတားဆီးနိုငျခဲ့ဘူး။ သူဟာ အောငျမွငျမှုခရီးလမျးမှာ ဘယျလိုအတားအဆီးတှပေဲရှိနပေါစေ မရောကျရောကျအောငျ သှားဖို့ ဆန်ဒပွငျးပွနတေဲ့သူပါပဲ။
ကီတာက “ကြှနျတျောတို့ကတော့ ဘောလုံးကစားဖို့ဆိုရငျ ဘာနဲ့ပဲကစားရပါစေ ဆော့ကွတာပါပဲ။ ကြှနျတျောလညျး ခွဗေလာနဲ့ ကစားခဲ့ရပွီး တဈခါတဈလတေော့ ဟောငျးနှမျးစုတျပွတျနတေဲ့ ဖိနပျတှေ ဝငျဆငျကစားခဲ့ရတယျ။ ကြှနျတေျာ့မှာ ဘောကနျဖိနပျမရှိဘူး။ လကျဆောငျရတဲ့ ဘောလုံးအကငြ်္ီတှဆေို အရမျးတနျဖိုးထားတယျ။ အဲဒီအရာတှကေ လကျရှိအခြိနျမှာ ပရျောဖကျရှငျနယျဘောလုံးသမားတဈဦးဖွဈဖို့ ကြှနျတေျာ့ကို တှနျးအားပေးခဲ့တဲ့အရာတှပေါပဲ။ ငယျငယျတုနျးကဆိုရငျ ကြှနျတျောက လူကောငျသေးတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ကစားတဲ့ပှဲတှမှော ဝငျကစားခှငျ့ရဖို့ အသညျးအသနျကွိုးစားခဲ့ရတယျ။ ပှဲကစားခှငျ့ရဖို့၊ ဘောလုံးရဖို့၊ သူငယျခငျြးတှရေဲ့ လေးစားမှုရဖို့အတှကျပေ့ါ။ အဲဒီအတှကျ လမျးပျေါမှာ သှားနတေဲ့ ကားတှကေိုတောငျ ကြှနျတျော ဂရုမစိုကျတော့ဘူး”လို့ ငယျဘဝကို ပွနျပွောငျးပွောဆိုခဲ့တယျ။ ကီတာဟာ ဘယျလောကျတောငျ ဘောလုံးကနျရတာ ဝါသနာပါလဲဆိုရငျ သူ့ရှမှေ့ာ ကနျလို့ရတဲ့အရာတှမှေနျသမြှ လြှောကျကနျနပွေီး သူ့မိဘတှကေ တဈခြိနျခြိနျကရြငျ ကီတာဟာ ပရိုဘောလုံးသမားတဈဦးဖွဈလာမယျလို့ အခိုငျအမာယုံကွညျခဲ့တယျ။
အသကျ(၉)နှဈအရှယျမှာ ဒသေတှငျးကလပျဖွဈတဲ့ Horoya AC အသငျးဆီ ရောကျရှိခဲ့ပွီး Conakry ဒသေမှာတော့ ကီတာက အကောငျးဆုံးဘောလုံးသမားတဈဦးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ အသကျ(၁၂)နှဈအရှယျလောကျမှာ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲတှကေို TV ကနေ တဈဆငျ့ကွညျ့ရှုခှငျ့ရခဲ့ပွီး တဈခြိနျခြိနျကရြငျ ထိပျတနျးလိဂျပွိုငျပှဲမှာ ကစားခှငျ့ရဖို့ အိပျမကျက ပိုပွငျးထနျလာခဲ့တယျ။ “ကြှနျတျော ဘောလုံးသမားဖွဈခငျြတာက ဘောလုံးပှဲတှကေို ခဈြမွတျနိုးရုံတငျမဟုတျဘဲ မိသားစုကို ထောကျပံ့ပေးဖို့ ရညျရှယျခကျြလညျးပါပါတယျ”။ ကီတာဟာ ဂီနီစဈတပျရဲ့ကလေးစဈသားစုဆောငျးရေးမှာ အဆှဲခံရဖို့ နီးစပျခဲ့ပမေယျ့ ကံကောငျးထောကျမလို့ လှတျမွောကျခဲ့တာဖွဈပွီး မဟုတျရငျ ဘောလုံးသမားမဖွဈဘဲ စဈသားဘဝနဲ့ အဆုံးသတျရမယျ့ကိနျပါပဲ။
ကီတာရဲ့ဖခငျက လီဗာပူးလျ Crazy Fan တဈဦးဖွဈပွီး သူ့အဖရေဲ့ အားပေးမှုကွောငျ့ ကီတာလညျး လီဗာပူးလျပရိသတျတဈဦး ဖွဈမှနျးမသိဖွဈခဲ့ရတယျ။ တဈဆကျတညျး သူ့သူငယျခငျြးတှပေါ လီဗာပူးလျပရိသတျတှဖွေဈလာတော့တာပါပဲ။ ထိပျသီးဘောလုံးသမားဖွဈခငျြရငျ ပွညျပကို ထှကျကစားမှဖွဈတာကွောငျ့ အသကျ(၁၆)နှဈအရှယျမှာ ကီတာ ပွငျသဈမွကေို စတငျခွခေခြဲ့ပါတော့တယျ။ ကိုယျမကြှမျးကငျြတဲ့နယျမွေ၊ မတူညီတဲ့ဘာသာစကား စတဲ့ပွဿနာတှနေဲ့အတူ ကီတာအတှကျ စိနျချေါမှုတှကေ စတငျတော့တာပါပဲ။ လျောရီယနျ့အပါအဝငျ ပွငျသဈကလပျတျောတျောမြားမြားမှာ အစမျးလကေ့ငျြ့မှုတှလေုပျခဲ့ပမေယျ့ ငွငျးဆနျခံခဲ့ရတယျ။ ကီတာကို လီမနျ့ဈအသငျးက ချေါယူလိုပမေယျ့လညျး သူတို့အသငျးရဲ့ ဘတျဂကျြအခွအေနအေရ လကျလှတျခဲ့ရပွီး ကီတာအတှကျ ကံကောငျးမှုတဈခုလို့ပဲဆိုရမလား၊ ကစားသမားကောငျးတဈဦးကို လကျလှတျခဲ့ရတဲ့အတှကျ လီမနျ့ဈအသငျး ကံဆိုးမှုပဲ ဆိုရမလား။
၂၀၁၃ ခုနှဈမှာ ပွငျသဈကလပျ FC Istres အသငျးက ကီတာကို ချေါယူခဲ့ပွီး တဈရာသီအကွာမှာပဲ သွစတွီးယားကလပျ ဆာလျဘာ့ဂျအသငျးဆီ ရောကျရှိခဲ့တယျ။ ဆာလျဘာ့ဂျအသငျးမှာ သူ့ရဲ့အကောငျးဆုံးသူငယျခငျြးက အခု လီဗာပူးလျအသငျးဖျော မာနေး Mane ပါ။ “မာနေးဟာ ကြှနျတေျာ့ကို အစစအရာရာ ကူညီခဲ့တယျ။ ဘာသာစကား၊ မိတျဆှဖှေဲ့ဖို့၊ အသငျးနဲ့ဒီမွို့အကွောငျးကို နားလညျဖို့ အားလုံးပေါ့။ မာနေးဟာ အရငျတုနျးကရော အခုအထိ ကြှနျတေျာ့ဘဝအတှကျအရေးပါတဲ့သူတဈယောကျပါ။ ကြှနျတေျာ့အတှကျတော့ သူဟာ အကိုကွီးတဈယောကျလိုပါပဲ”။၂၀၁၆ ခုနှဈမှာ ဂြာမနျကလပျ လိုကျပျဇဈအသငျးဆီရောကျရှိခဲ့ခြိနျမှာ ကီတာရဲ့ကစားသမားဘ၀ အောငျမွငျမှုခရီးလမျး စတငျခြိနျလို့ဆိုရမယျ။ လိုကျပျဇဈအသငျးနဲ့အတူ တောကျပလာတဲ့ ကီတာကို ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာပဲ လီဗာပူးလျအသငျးက ချေါယူဖို့ သဘောတူညီမှုရခဲ့တယျ။
အခုဆိုရငျ ကီတာဟာ ငယျစဉျကတညျးက အားပေးခဲ့ရတဲ့ လီဗာပူးလျအသငျးမှာ ကစားခှငျ့ရပွီ၊ သူကစားခငျြတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျလို ထိပျသီးပွိုငျပှဲမှာလညျး ကစားခှငျ့ရပွီ။ လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ဂန်ထဝငျကစားသမား ဂရြတျ Gerrard ဝတျဆငျခဲ့တဲ့ ကြောနံပါတျ(၈)ကိုလညျး ဝတျဆငျခှငျ့ရခဲ့ပွီ နောကျထပျအိပျမကျဖွဈတဲ့ နာမညျကြျောဘောလုံးသမားဖွဈဖို့ အိပျမကျကလညျး ဖွဈခှငျ့ရမလားဆိုတာတော့ . . .